Xiyyoota kamshaa, bakka sararawwan qajeeloo sararawwan Xiyyoota waliinii fi sararawwan gara islaayidii ammee yookiin fuula bana.
Yoo barbaadde, dhangii - sarara filachuudhaan erga sarara kaafteen booda xiyya ida'uu ni dandeessa, booda haalata xiyyaa sanduuqa haalata irraa filachuu.
Bakka galmee ammee keessatti ati harkistutti sarara qajeelaa kaasa. Sarara digirii 45tti dirqamsiisuuf, jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Sarara xiyyaan xumuuramu
Sarara qajeelaa geengoodhaan xumuuramu bakka galmee ammee kaassatti harkiftu kaasa. Sarara digirii 45tti. dirqamsiisuuf jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Sarara xiyya/Geengoo waliinii
Sarara qajeelaa geengoodhaan xumuuramu bakka galmee ammee kaassatti harkiftu kaasa. Sara gara digirii 45tti dirqamsiisuuf jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Sarara xiyya/Rog-arfee waliinii
Sarara qajeelaa xiyyaan jalqabuu fi rog-arfeedhaan xumuuru kan bakka galmee ammee keessatti harkiftu kaasa. Sarara gara digirii 45tti dirqamsiisuuf jijjiirraa gaqqabi wayita harkiftu.
Sarara qajeelaa gara rogawwaniin gara digirii 45tti dirqisifamu kaasa.
Sarara xiyyaan Jalqabu
Sarara qajeelaa xiyyaan jalqabu kan bakka galmee ammee keessatti harkiftu kaasa. Sarara gara digirii 45tti dirqisiisuudhaaf , jijjiirraa gaqqabi wayita harkiftiu.
Sarara Geengoo/xiyya waliinii
Sarara qajeelaa geengoodhaan jalqabuu fi xiyyaan xumuuru kan galmee ammee keessatti harkiftu kaasa. Sarara gara digirii 45tti dirqisiisuuf, jijjiirraa gaqqabi wayita harkiftu.
Sarara Rog-arfee/Xiyya waliinii
Sarara dheerinaa fi bal'na qajeelchaan marfame kaasa. Dheerinaa fi bal'inaa sararawwanii ofumaan dheerina fi bal'ina sorooroo kan shalluu fiagarsiisuudha. Dheerinaa fi bal'ina sararaa kaasuuf, kamshaa xiyyootaa bariitii, sajoo Dheerinaa fi bal'ina sararaacuqaasi. Qaree kee bakka sararri jalqabu fi dheerinaa fi bal'ina sarara kaasuf harkisi gadhiisii yoo xumurte.
Dheerinaa fi balina sararaa
Sarara dheerinaa fi bal'na qajeelchaan marfame kaasa. Dheerinaa fi bal'inaa sararawwanii ofumaan dheerina fi bal'ina sorooroo kan shallaguu fi agarsiisuudha. Dheerinaa fi bal'ina sararaa kaasuuf, kamshaa Xiyyootaa bariitii, sajoo Dheerinaa fi bal'ina sararaa cuqaasi. Qaree kee bakka sararri jalqabu fi dheerinaa fi bal'ina sarara kaasuf harkisi gadhiisii yoo xumurte.
Bal'inni fi dheerinni sarara dheerina wanta cinaa wajjiin akka walfakkaatu yoo barbaadde, furtuu Ajaja Ctrlgaqqabi wayita harkifamu. Dheerinaa fi bal'ina sarara gara digirii 45tti dirqisiisuuf furtuu jijjiirraa gaqqabi wayita harkifamu.
Fakkaasaa LibreOffice keessatti dheerinni fi bal'inni sararaa yeroo hundaa qajeelcha irratti baqqaanni saagame Dheerinaa fi Bal'ina sararawwanii jedhama. Baqqaana sana akka hin mul'annetti yoo keessa kaafama keetirratti dheerinaa fi bal'ina arguu hindeessuu.
Sarara xiyyoota waliinii
Sarara qajeelaa xiyyoota waliini dhuma lameenitti kan bakka galmee ammee keessatti harkiftu kaasa. Sarara gara digirii 45tti dirqamsiisuuf jijjiirraa gaqqabi wayita harkiftu.
Title is: xiyyoota